PressReader - Ilanga: 2018-11-22 - Isikole sasemakhaya sizihlule zonke eKZN
Isikole sasemakhaya sizihlule zonke eKZN
Sihlabane kowezindlu zangasese ezihlanzekile
Ilanga - 2018-11-22 - Izindaba - THANDEKA NGOBESE
SIKHALE semuka nevawusha ka-R10 000 isikole sasendaweni yasemakhaya, KwaJali, eHarding, esiziqwaqwade emakhanda zonke ezaKwaZulu-Natal ngokuba nezindlu zangasese ezihlanzekile emncintiswaneni iDomestos Cleaner Toilets, Brighter Future Campaign, obuseGoli ngoMsombuluko.
IKwaMphika Primary School yaKwaJali ibingesinye sezikole ebezibizelwe eGoli ngoMsombuluko ukuyokwamukela lo mklomelo waso esiwuthole kwabakwa-Unilever, okungabakhiqizi beDomestos.
Isekela likathishanhloko kulesi sikole, uMnu Thandanani Ndaleni, lithe isikole sabo singesokuqala kule ndawo yasemakhaya ukuba nezindlu zangasese ezishaywayo - okungezamantombazane eziwu-12 nezabafana eziwu6, bese kuba khona nezincane ezisetshenziswa ngabafundi bakwaGrade-R.
Lichaza ngokubenze bathola lo mklomelo, lithe baqale bazifundisa izingane ngokubaluleka kokuhlanzwa kwezindlu zangasese.
“Siqashe nesisebenzi esiwahlanzayo zonke zinsuku ekuseni nangesikhathi abafundi sebebuya ekhefini lasekuseni. Senza isiqiniseko sokuthi amaphepha asendlini yangasese ahlala ekhona njengoba siwathenga isonto nesonto.
“Kusijabulisile ukuba isikole sethu sithole lo mklomelo ngoba uzosilekelela kakhulu ekuthengeni izinto zokuhlanza namaphepha asendlini yangasese," kusho uMnu Ndaleni.
UNkk Lethepu Matshaba, oyisekela-mengameli kwa-Unilever Southern Africa, uzihalalisele kakhulu izikole ezidle umhlanganiso kulo mkhankaso. Uthe sezizonke izikole ebezingenele lo mncintiswano beziwu-210.
Baklomelise izikole eziwu-12 ngokuhlanza kwazo kahle izindlu zangasese nezisebenzi eziwu-28 ezenza lo msebenzi wokuhlanza lezi zindlu.
AbakwaUnilever baveze ukuthi ngeDomestos Cleaner Toilets Brighter Future Campaign, sebephumelele ukwakha izindlu zangasese eziwu-27 ezikoleni zasemalokishini nezasemakhaya.
Kulo nyaka uthi bazibophezele ekwakheni izindlu zangasese ezikoleni ezimbili. Uthi bakholwa wukuthi isibalo sezikole ezizokwakhelwa, sizokwanda njengoba inxusa lalolu hlelo, u-Anele Mdoda, ongumethuli wezinhlelo kumabonakude, selibasizile laqoqa u-R700 000 ukuqhuba lo mkhankaso.
Ekhuluma neLANGA u-Anele, uthe uzihlanganise nalo mkhankaso ngemuva kokuba kunomfundi wase-Eastern Cape ophoseke emgodini wendlu yangasese esikoleni washona.
“Ngibone ukuthi uma singase sihlangane senze okuthile njengoba abakwaDomestos sebephumele obala bathi bangasiza, nami angijoyine. Noma ngingenayo imali etheni ephaketheni, kodwa ukuba khona kwami kuzowenza umehluko.
“Ngijabulile ukuthi abantu sebesizile bafaka le mali engikholwa wukuthi isazokwanda njengoba umkhankaso ungamile," kusho yena.
ISITHOMBE NGU: THANDEKA NGOBESE
UMNU Thandanani Ndaleni, oyisekela-thishanhloko KwaMphika Primary School, uhambe ehleka yedwa emuva kokuthola umklomelo wesikole sakhe kwabakwa-Unilever.